Maalinta: Maarso 22, 2018
7 ayaa qiyaastii hal bil u jirta furitaanka garoonka cusub ee magaalada Istanbul. In kasta oo shaqooyinka diyaarinta garoonka diyaaradaha ay diyaar u yihiin adeegga oo aan kala go 'lahayn, haddana Isuduwaha Guud ee AirportHaber Ali Kıdık wuxuu eegayaa nooca kama dambaysta ah ee Terminalka. [More ...]
Sanadkii la soo dhaafay Karşıyaka Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir, oo billowday adeegga taraamyada, ayaa bilaabaya inay ka shaqeyso rakaabkii ka horreeyay tareenka Konakway laga bilaabo 24 Maarso Sabtida. Muwaadiniinta, mudada qalliinka ka hor ee taraamka "bilaash" waa fuuli karaan. Magaalada weyn ee Izmir [More ...]
3. Garoonka diyaaradaha ee Istanbul
Esracan Aşkın oo ka socda Magaalada ITU iyo Qorshaynta Gobolka, 3. Wuxuu u qoray Life Life in garoonka diyaaradaha u horseedi doono waxyeelo deegaanka. Annaga oo ah ardayda ITU ee Magaalada iyo Qorshaynta Gobolka, waxaan fursad u helnay inaan ku aragno garoonka diyaaradaha oo dhismahoodu socdo. [More ...]
Hasan BEKTAŞ, Gudoomiyaha Ururka Shaqaalaha Gaadiidka ee Qaramada Midoobay (BTS), ayaa ku qoray maqaalkiisa: ülerek Waan ka qoomameyneynaa oo ka qoomameyneynaa tallaabada dowladda Faransiiska ay ka qaadatay sharciyeynta shirkadaha gaarka loo leeyahay ee SNCF, oo bixiya adeegyada tareenka ee dalka. Tareennada [More ...]
Baasaboorka Shabakada Canakkale
18 Bishii Maarso, xafladda aasaasiga ah ayaa la qabtay iyo buundada '30 Çanakkale', oo u adeegi doonta 1915 kun oo baabuur maalintii, ayaa la yaaban lacagtaas. 2022 kun oo shaqaale ah buundada ku dhamaan doonta 10 [More ...]
BURULAŞ waxay iibisaa Akshemsettin Ship
Waxaan sidoo kale weydiisanay Çapar, Maareeyaha Guud ee BURULAŞ, oo ah qeybta hoose ee degmada Bursa Metropolitan Munsel, oo laga iibiyey Akşemsettin Ship, oo dhowaan laga iibiyay shirkad dalxiis oo ku taal Marmaris, oo dhawaan laga saaray Lakeznik Lake. iyo shaqo la’aan [More ...]
Guddoomiyaha Antalya Munir Karaloğlu 'Alanya Castle Shirka ayaa u yimid kaqeybgalka Alanya wuxuu soo saaray xalka dhibaatooyin badan. Karaloğlu, qiimaha gawaarida fiilada 18 TL oo sheegaya in badan "Aan tuuraynaa," ayuu yidhi. Gudoomiyaha Antalya [More ...]
TÜVASAŞ Rakaabka Bursaray ee Rotterdam Wagons
Maalmihii ugu horreeyay ee sannadka cusub waxaan ku dhawaaqnay wararka iibka ee tiirarkan. Khadka Konsel ee Magaalada Bursa Metropolitan ee Kestel waxaa loo adeegsan jiray macaamiisha gawaarida Roterdam waqti dheer. Bursaray wadaha in meesha laga saaro baabuur Rotterdam ee BURULAŞ iibinta, magaca TÜVASAŞ gaaban, Turkey baabuur Industries Inc. in Sakarya. hergeli [More ...]
Birdal iyo Apaydin ayaa baaray Ankara-Sivas YHT Line
Orhan Birdal, Ku-xigeenka madaxa, Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badaha iyo Isgaarsiinta, iyo Agaasimaha Guud ee TCDD İsa Apaydın, Ankara-Sivas Dhismaha Tareenka Sare ee Xawaaraha Sare ee horumarka ee ay baarayaan helicopter. Mashruuca 'Yerköy-Sivas' [More ...]
RayHaber 22.03.2018 Warbixinta Shirka
Dhexroor 920 mm Qalab buuxa oo ah Gawaarida Naafada ayaa la iibsan doonaa (TÜLOMSAŞ) (Dib loo dhigay taariikhda 05.04.2018) Forklift waa la iibsan doonaa (TÜVASAS)
Khadka Carbaab ee Khadka Gaadiidka ee Gawaarida Alanya
Alanya Cable Car waxaa loo muujiyey xalka ugu weyn ee dhibaatada taraafikada iyo gaadiidka ee taariikhda Alanya Castle, oo ah murashax dhaqameed UNESCO World Cultural Heritage. Antalya Castle Munir Karaloğlu oo madax ka ah Xarunta Dhaqanka “Qiimaynta Alanya Castle [More ...]
Saacadaha shaqada ee basaska dawlada hoose ee ka shaqeeya dawlada hoose ee magaalada caasimada ah ee Kahramanmaraş ayaa dib loo habeeyay. Qeybta Adeegyada Gaadiidka Dawlada Hoose ee Magaalada Kahramanmara, oo ka hoos shaqeysa basaska degmada, maalmaha shaqada, fiidka iyo [More ...]